SIDA LOO NIDAAMSADO WAQTIGAAGA! – Mareeg Online
SIDA LOO NIDAAMSADO WAQTIGAAGA!
SIDA LOO NIDAAMSADO WAQTIGAAGA
Ummadaha horumarkooda, iyo ilbaxnimadooda waxaa lagu qiimeeyaa kolba siday uga faa’ iideystaan una nidaamsadaan waqtigooda inta uu le eg yahay. Sidaa awgeed; ayaan Mowduuceena Maanta waxaan uga hadlayaa sida loo Maareeyo Waqtiga iyo siyaabaha looga faa iideysan karo.
Maaraynta Waqtiga waxay u baahantahay shaqo joogta ah, waa xirfad qofka siduu uga shaqeeyo uu uga faa’iidaayo. Waa hab qorshayn iyo fulin iskugu jira.
Halbeegyada Waqtiga ee caalamamiga ah waa ilbirigsi, daqiiqad, saacad, maalin, bil iyo sanad si isku mid ah ayaana Alle (SW) wuxuu u siiyay si is le’eg. dad iyo duunyaba inta adduunka joogtaba ,
Waqtiga wuxuu leeyahay astaamo iyo tilmaamo u gaar ah oo aan kugu baraarujinaayo in aad xasuusnaato.
• Waqtigu deg deg ayuu nagu dhaafaa.
• Waqti kaa tagay suuro gal maahan marnaba in waqtiga kaa tagay dib loo soo celiyo.
• Waqtigu waa xadidan yahay sid a maalinta iyo habeenka.
• Waqtigu wuxuu leeyahay qiimo lacageed oo la taaban karo.
Waqtigu waa hanti waa waxa ugu qaalisan ee nolosheena aan heysano, waqtigu waa cimrigeena, miyay jiri karaan wax aad ka jeceshay noloshaada? Waa maya hadabaha ha dayicin waqtigaaga maxaa yeelay Waqtiga oo aad dayacdaa (lumisaa) waa noloshaadi oo aad lumisay.
Ahmiyada waqtiga waxaa sidoo kale ka hadlaaya diinteena suuban ee islaamka ah; Quraanka kkariimka ah iyo sunaha Rasuulkeena Maxamed (SCW).
Culimada Tafsiirka Quraanka Kariimka ah waxay dhamaantood cadeeyeen in hadii Illahay (SW) uu wax ku dhaarto ay tusinayso muhiimada iyo qiimaha uu sheygaasi leeyahay.
Sida Alle (SW) uu ugu dhaarat bilawga suurado badan oo Quraanka kamid sida:
WAL LAYL, WAL CASRI, WAL NAGMI, WAL DHUXAA
Sida uu ka soo wariyay Mucaad Bin Jabal in uu Nabigu (SCW) uu yiri: ruuxa aadanaha ah ciribtiisu ka dhaqaaqi mayso Illahay agtiisa ilaa laga weydiiyo afar shey
1) Wixi cimrigiisa uu ku dhameeyay
2) Wixi dhalin yaranimadiisa uu ku bixiyay
3) Maalkiisa Meesha uu ka keenay iyo Meesha uu ku bixiyay
4) Cimrigiisa waxa uu ku sameeyay.
Oraahyo iyo kalmado xikmado xambaarsan kuwaasoo bulshooyinku ay ku cabiraan waqtiga ayaa waxaa ka mid ah “Waqtiga waa sida seefta oo kale ee jar inta uusan ku jarin” ama “Gabal tagay jiigsimaad maleh”. “waari meyside War hakaa haro”. “waqtiga kaa tagat Murugow reebaa”. Iwm.
Hadaba, Waqtiga maamulkiisa iyo nidaamintiisa sida aan u fahano oo ugu dadaalno ayaa faa’iidadiisu ay kor u kacdaa. wax soo saar ruuxa shaqsiga ah iyo kan bulshaba waxay ku xiran tahay siday u qiimeeyaan waqtiga. Markaad waqtiga si fiican aad u maareyso waxaa kuu qabsoomaya howl badan mudo yar gudaheed.
Kolka waqtiga xaqiisa cadaadis kaaga yimaado oo aad si fiican u maareyn kari weydo waxay taasi kuu keeneysaa walwal (stress) farabadan.
dadka nolosha ku guulaystay waxay waqtiga u kala saaraan waqti ay shaqaystaan, waqti ay wax bartaan , mid ay wax aqristaan, waqti ay nastaan ama mada daashaan iwm. Sidoo kale waxaa saamayn kugu leh degaanka iyo bulsha aad la nooshahay
MAXAA LUMIYA WAQTIGA?
Markaad dhibatada fahanto ayaad xalkeeda gaari karta durbada; sidaa awgeed wax yaabaha waqtiga lumiya waxaa ka mid:
• Wahsiga iyo caajiska ayaa ah labada shey ee ugu daran ee naga lumiya waqti qiimo leh.
• Nolosha carsigaan tiknoolajiyada waxaa waqti badan nooga baxaa daalacashada baraha bulshada,, ku hadalka telefanada gacanta , daawaswha aflaanta iyo Tv yada, iwm waqtisoo hadii aan u isticmaali lahayn wax barasho, shaqo iyo wax soo saar kale mid miro dhal leh noqon lahaa.
• Go’aan qaadasho la’aanta shakiga iyo waswaaska asagoo ku celcelina hal shaqo Meesha nalaga rabay in uu horey u socdo.
• In aan isku dayno in aan dhowr shaqo wada qaba mar qura dabadeetana labadoodiba aan qabyo uga tagno.
• Xiriirka aan la leenahay bulsha qeybaheda kala duwan sida saaxiibada, qoyska ay naga carqaddeeyaan shaqo dhex noo socotay waqti kooban in aan ku dhameynana loo baahan yahay.
• Macaasida iyo danbiyada, balwada sida sigaarka, qabriga, jaadka iwm
• Anoo jarna xiriirka aan la leenahay Alle (SW)
• Anagoo aan la xisaabtamin nafteena.
• Nafta oo na hogaamisa taasoo na halmaansiisa qiimaha waqtigu leeyahay.
• Daruufaha shaqsi ah sida mushkiladaha shaqada guriga, caafimaad darada iyo qorhse la’ aanta
• Hurdada badan ee xad dhaafka ah
• Dareen la’aan masuliyeed; anagoo aa isi saarin wax masuuliyad ah.
• Go’aan gaashada deg deg ah oo keenta in aan samayno gafaf badan taa waqti badan naga qaada si xidoodad.
Ayaddoo Arrimahaan oo dhan iyo kuwa kale oo ka sii badan uu habdhaqankeenu ku salaysan yahay ayaad hadana waxaad qof ku dhahaayo: “aniga waqti igu filan ma haysto.” “Mashquul yaan ahay” “ fursad uma haayo waxaas” Iwm.
SIDEE U NADAAMINAA WAQTIGA
Marka aan rabno in aan waqtigeena nidaamino waa in aan qorshe jadwal u samaysano nolosheena ee maahan in aan waqti walba shaqaynayno sida dad badan ay u arrintaa qaladka ugu fameen.
Hada Jad walka qorsheynta waqtiga waxaan u kala qeybin karnaa sida soo socota:
– Waqti aan shaqysano oo aan adduunka ka soo dhacsano kasab
– Waqti aan cibaadaysano oo Alle 9SW) barino
– Waqti aan nasono, madadaalano, wax cuno , cabno jiifano ama raaxaysano.
– Waqti aan nafteena aan hormarino nafteena wax cusubna aan barano haday ahaan lahayd cilmi diini, maadi ama xirfad ah intaba.
– Waqti aan la xisaabtano oo qiimeyno nafteena si aan u xaqiijino ahdaafteena nolosha, anagoo isweydiinayna maxaan ii qabsoomay maanta, bishaan, iyo sanadkaan maxaytahay in aan qabsado mustaqbalka dhaw iyo kan dheerba anagoo ku qoreyna diiwaankena ( To do List) kaasoo softwa re ah ama buugga xusus qorka caadi ah intaba.
Si aan u maareeyno waqtigeena waa in aan lee nahay yool cayiman
Waa muhiim wana deg deg/ / darruuri
Waa muhiim balse deg deg maahan
Waa deg deg lkn muhiim maahn
Muhiim maahn deg degna maahan
Shaxda kala mudnaan siinta howlaha waqtiga cayiman leh
SIFAADKA QOFKA WAQTIGA HAGAAJIYA WAXAAA KA MID AH:
o Shaqadiisu waxay leedahay miro dhal iyo wax soo saar fiican
o Wuxuu ku dhameeyaa howl walba waqtigeeda waana lagu tix galiyaa shaqadiisana wuu ka adegyahay.
o Wuxuu nolosha ka gaaray horumar la taaban karo wuuna dagen yahay dabeecad ahaan.
Dhinaca kale astaamaha qofka waqtiga dayaca oo maarayn kari waaya waxaa ka mid ah:
o Shaqadiishu malahan wax soo saar iyo tayo fiican midna
o Wuxuu ka soo dib dhacaa waqtiga howsha laga rabay in la dhameeyo ama waa habsan.
o Maahan Qof degan dabci ahaan maahan, waxaa ku badan isku buuqa , walwalka iyo isdhexyaaca.
Gunaanadkii waxaan rajaynayaa in aad ka faa’iideysateen wixii aan qalday waxay ka ahaadeen waa naf iyo sheydaan inti aan asiibayna Allaha nagu anfaco oo hanadhigo kuwi waqtigooda ka faa’iideysta insha allah.
W/Q: MAXAMED XASAN JIM’ALE
Shirkadda Twitter-ka oo ku dhawaaqday arrin aad loo hadal hayo
Ragii ka dambeeyay dilka taliyihii ciidanka gor gor oo xukun dil ah lagu riday
Milkiilihii shirkadda Future traders oo Muqdisho ka baxsaday:
Lamaane 94 jir ah oo u xiran Taliyaha Booliska, Ku digasho iyo awood sheegasho: